Raikitra ny fametrahan’ny zandary sakana: ifampitadiavana sy karohin’ny Fitsarana ny depiote i «Leva» | NewsMada
Raikitra ny fametrahan’ny zandary sakana: ifampitadiavana sy karohin’ny Fitsarana ny depiote i «Leva»
Par Taratra sur 10/02/2020
Mitohy ny raharaha momba ny depiote Raveloson Ludovic na i Leva. Tsy niandry ela fa niroso tamin’ny famoahana didy fikarohana azy ny eo anivon’ny Fitsarana, nanomboka ny faran’ny herinandro teo. Miatrana any amin’ny lalam-pirenena ny zandary…
Efa miatrana amin’ny sakana rehetra amin’ny lalam-pirenena ny eo anivon’ny zandary, indrindra fa ny mianantsimo, ny RN7 iny. Araka ny loharanom-baovao, raharaha hafa indray ity hitadiavan’ny Fitsarana ny depioten’i Mahabo ity. Ahina ho voarohirohy amin’ny vono olona sy fandrahonana ho faty ny tenany. Manodidina ny fito ny raharaha mahavoasaringotra azy.
Fanentanana olona hikomy, vono sy daroka…
Anisan’izany ny vono olona, ny taona 2016 sy ny 2017. Eo koa ny fandripahana ala sy fanodinkodinana harem-pirenena, nidiran’ny Bianco an-tsehatra ny famotorana momba izany ka nahavoasazy azy dimy taona an-tranomaizina, tao Morondava. Manampy ireo ny fitorian’ny fikambanana iray azy. Eo koa ny fandrahonana sy fanentanana olona hikomy ary ny fitoriana nataon’ny olona iray niharan’ny herisetra sy daroka nataon’io depiote io.
Teo anelanelan’izany, efa nomena tombony hiasa ivelan’ny fonja ny tenany. Nosamborin’ny zandary indray izy taorian’io. Nitohy tamin’ny fahazoany fahafahana vonjimaika ary tena nanaitra ny maro ny herinandro teo izany.
Tsy misy idiran’ny governemanta ny MD
Nilatsaka anefa ny fanambaran’ny governemanta, ny zoma teo fa tsy misy toromarika avy amin’ny fitondrana ny nivoahany ny fonja, nahazoany fahafahana vonjimaika (MD). Tonga hatrany amin’ny fampiatoana ny tompon’andraikitry ny Fitsarana miisa roa any Toliary izany. Tsy vitan’izany fa hiakatra amin’ny fitsipi-pifehezana koa ary mbola hanao ny asany ny Bianco, noho ny fanahiana kolikoly tao ambadik’izany rehetra izany.
Araka izany, andrasana ny ho tohiny amin’izao fikarohana ny depiote Leva izao.